साग र निर्वाचन लक्षित पोखरामा सुरक्षा व्याबस्था कडा पारिदै – Online Annapurna
साग र निर्वाचन लक्षित पोखरामा सुरक्षा व्याबस्था कडा पारिदै
१ मंसिर २०७६, आईतवार १३:४६ November 17, 2019 171 Views
दीननाथ बराल पोखरा १ । मंसिर साग र निर्वाचन लक्षित गरी पोखरामा शान्ति सुरक्षालाई कडा पारिने भएको छ । साग र निर्वानलको समयमा पोखरामा हुन सक्ने अवान्छित कृयाकलापलाई नियन्त्रण गर्न कास्की प्रहरीले सुरक्षा ब्याबस्थालाई कडा पारिएको कास्कीका प्रहरी प्रमुख एस.पी. दानबहादुर कार्कीले आइतबार पोखरामा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बताएका हुन्।
यही मंसिर १४ गते हुने कस्की क्षेत्र नम्बर २ प्रतिनिधि सभा सदस्यकोे उपनिर्वाचन र मंसिर १५ देखि २४ गतेसम्म १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) का केही खेल पोखरामा समेत आयोजना हुने भएकोले उक्त अवसरमा पोखराको शान्ति सुरक्षाको थप चुनौती आफुहरुलाई आएको एस.पी. कार्कीले जनाए । निर्वाचनमा नकरात्मक गतिविधि गर्ने तत्वलाई आफुहरुले हाल निगरानी गरेको एस.पी.कार्कीले बताए ।
स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न र सागमा हुने कुनै घटनालाई न्यूनिकरण गर्न कास्कीको शान्ति सुरक्षालाई सवै सुरक्षाको निकायलाई परिचालन गरिने भएको उनले जनाए । प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन पोखरामा हुने हुदा धेरै नेपालीहरुको चासो पोखरामा हुने भएकोले गर्दा पनि यहाँ धेरै मानिसहरुको चाप हुने एस.पी. कार्कीले जनाए ।
उनले भने “यस पालीको निर्वाचन सवैको ध्यान पोखरामा केन्द्रित भएको छ, यसमा हाम्रो लागि शान्ति सुरक्षाको उत्तिकै चुनौती रहेको छ । ” सागमा नेपाल सहितका ७ देशका खेलाडीहरु पोखरामा आउने हुदा उनीहरुलाई खेल मैदान देखि आवासिय क्षेत्रसम्मको लागि निगरानी गर्ने भएको एस.पी.कार्कीले जनाए ।
पोखरामा एकै समयमा निर्वाचन र साग आयोजना हुने भएकोले जनशत्ति र सवारी साधनहरुको आवश्यक मात्रमा माग गरिएको उनले जनाए । एस.पी. कार्कीले कास्की क्षेत्रमा हाल सेवाग्राहीले फोन गरेको करिब ५ मिनेट ८ सेकेण्डमा प्रहरी पुग्ने गरेको बताए ।
विभिन्न वडा प्रहरी कार्यालयहरु मध्य बैदाम वडा प्रहरी कार्यालय ४ मिनेट २९ सेकेण्डमा प्रहरीको उपस्थिती रहेको उनले जनाए । त्यसै गरी ग्रामिण इलाकामा ३२ मिनिेट ७ सेकेण्डमा प्रहरीको पहुच पुग्ने भएको एस.पी. कार्कीले जनाए ।
यस चालु आर्थिक बर्ष साउन देखि कात्र्तिकसम्म २२ हजार ७ सय सवारी साधनहरु कार्बाही हुदा १ करोड ७४ लाख ४६ हजार रुपैया राजश्व संकलन भएको कास्कीका प्रहरी प्रवक्ता डि.एस.पी. राजकुमार केसीले बताए ।